Isbahaysiga Turkiga iyo Bakistaan oo walaac ku beeray Maraykanka - ARAABINEWS.COM | ARAABINEWS.COM
Isbahaysiga Turkiga iyo Bakistaan oo walaac ku beeray Maraykanka
Dawladaha Bakistaan iyo Turkiga ayaa si aada isaga soo dhawaaday baryahan dambe kadib markii Turkigu la kulmey cadaadisyo badan oo ku saaabsan difaaa dalkiisa. Turkiga ayaa hubkiisu u badan yahay difaaca dhulka laakiin aan haysan awooda cirka.
Inkastoo uu ka mid yahay ururka reer galbeedka ee NAATO ee uu hogaamiyo Maraykanku haddana wuxuu la kulmay cadaadisyo badan oo u saabsan dhinaca gantaalada iyo taangiyada.
Inkastoo Turkigu horumar balaadhan ka sameeyay dhinaca diyaaradaha aan is wadin siiba si cajiiba u garaaceen hubkii Ruushku siiyay Armiiniya haddana male gantaalada dagaalka.
Bakistaan oo horumar weyn ka gaartey dhinaca gantaalaha oo Shiinaha iyo Koofurta Kuuriya ka caawiyeen ayaa haddana Shiinuuhu ugu daray diyaaradaha dagaalka noocoodii ugu dambeeyay oo ay hadda iyaga uu ku wareejay sancada.
Haddaba labadan quwadood ee is biirsabaya oo Bakistaan Turkiga siinayso gantaalaha qaadaya dayax gacmeredk halka Somaliya noqonayso meeshii ay ka duuli lahaayeen, ayaa walaac xoogan ku beeray Maraykanka oo hadda talo faraha ugu jirin.
NAATO ma rabto waxkasta oo dhaca inay lumiso TUrkiga, Turkiguna inuu ka baxo ma rabo laakiin is difaac looma ogola waana ta Turkigu ku qasabtey inuu Ruushka ku xirmo meelaha qaar.
Bakistaan oo iyana raadinaysa diyaaradaha aan is wadin iyo sancooyin badan oo Turkigu kaga horeeyo ayaa fursadan ka faaiideysanaysa. Bakistaan oo dal faqiira ah haddana waxay leeyihiin awooda Nukliyeer oo ah tan reer galbeedku ka waklaacsan yihiin inay u gudbiyaan Turkiga.